पशुपतिनाथले हामि सबैको कल्याण गरुन ! आजको राशिफल: २०७५ साल भाद्र ३० गते शनिवार – Etajakhabar
पशुपतिनाथले हामि सबैको कल्याण गरुन ! आजको राशिफल: २०७५ साल भाद्र ३० गते शनिवार
ॐ नमो भगवते वासुदेवाय । सच्चिदानन्दरुपाय विश्वोत्पत्यादि हेतवे । ताप त्रय विनाशाय श्रीकृष्णाय वयम् नुमः ।पञ्चाङ्ग÷वारवेला,मुहूर्त र राशी श्रीसूर्य दक्षिणायन,वर्षर्तुः,विरोधकृत् नाम संवत्सर,शाके १९४०,सम्वत २०७५ साल भाद्र ३० गते शनिवार नेपाल सम्बत ११३८ ञलाथ्व,सन् २०१८ सेप्टेम्बर १५ तारिक शुक्लपक्ष षष्ठी तिथि अपरान्ह ५ वजेर ४० मिनेटसम्म,अनुराधानक्षत्र अहोरात्र,विष्कुम्भयोग,तैतिलकरण,आनन्दादियोग अमृत,सूर्य सिंह राशीमा,चन्द्रमा वृश्चिक राशीमा ।
ॐः–राहुकालः–विहान८÷५३वजेबाट१०÷२६ वजेसम्म रहनेछ,यमघण्टायोगः–अपरान्ह१÷३१ वजेबाट ३÷३वजेसम्म रहनेछ,दूरमुहूर्तः–विहान ७÷२८ वजेबाट ८÷१७ वजेसम्म रहनेछ,यी अशुभ मुहूर्त मानिन्छ । शुभ अभिजित मुहूर्तः–पूर्वान्ह ११÷३४ वजेबाट मध्यान्ह १२÷२३ वजेसम्म रहनेछ । गुली कालः–विहान५÷४० वजेबाट ७÷२२ वजेसम्म रहनेछ,यो सामान्य मानिन्छ ।
ॐःसूर्योदयबाट प्रातः७÷२१ वजेसम्म कालवेला,७÷२१वजेदेखि ८÷५३ वजेसम्म शुभवेला,८÷५३ देखि १०÷२५ वजेसम्म रोगवेला,१०÷२५ देखि ११÷५८ वजेसम्म उद्वेगवेला,११÷५८ देखि १÷३०वजेसम्म चरवेला,१÷३० देखि ३÷२ वजेसम्म लाभवेला,३÷२ देखि ४÷३४ वजेसम्म अमृतवेला र ४÷३४ वजे देखि सूर्यास्तसम्म कालवेला रहनेछ ।
ॐःसूर्यास्तबाट ७÷३५ वजेसम्म लाभवेला,७÷३५ वजेदेखि ९÷३ वजेसम्म उद्वेगवेला,९÷३ देखि १०÷३१ वजेसम्म शुभ वेला,१०÷३१ देखि ११÷५८ वजेसम्म अमृतवेला,११÷५८ देखि१÷२६ वजेसम्म चरवेला,१÷२६ देखि २÷५४वजेसम्म रोगवेला,२÷५४वजे देखि ४÷२२ वजेसम्म कालर ४÷२२वजे देखि सूर्योदयसम्म लाभ वेला रहनेछ ।
दिन प्रतिकुल छ,नयाँ काममा हात नहाल्नु होला दुख पाईने छ । घरयासी समस्या बढ्ने छन् । मानसिक चिन्ता पनि बढ्ने छ । मातका साथै आफ्नो स्वास्थ्यमा समस्या आउन सक्छ । अनावस्यक खर्च बढ्ला ।
वैदेशिक यात्राको सम्भावना देखिन्छ । नयाँ काम हात लाग्न सक्ने कुुरालाई नकार्न सकिन्न । गरेका कामबाट लाभान्वित हुनुहुनेछ । उद्योग,धन्दा बन्द व्यापारमा उन्नति प्रगति हुनेछ । काम गर्ने जोश जागर बढ्नेछ ।
मुद्धा,मामिलामा विजय हात लाग्नेछ । काम गर्दा गोपनियता अप्नाउनु बढि उचित हुनेछ । व्यापार व्यवसायमा विस्तारै सुधार आउनेछ । आफन्तबाट नै शत्रुवत व्यवहार हुन सक्छ। मानसिक एवं शारीरिक श्रम बढि गर्नु पर्ला ।
समयमा निर्णय लिन सकिएन भने आफ्नो काममा अरुले अधिकार जमाउने । लगनशिल भई गरेका काम सफल हुनेछन् । आर्थिक तनाव कायम रहने देखिन्छ । साझेदारको विश्वासमा मात्रै काम नगर्नु होला ।
घरयासी बातावरण खलबलिन सक्छ । सम्पतिको विषयलाई लिएर विवाद नपर्ला भन्न सकिन्न । व्यापार घट्नेछ । स्वास्थ्यमा समस्या आउन सक्छ । अनावस्यक चिन्ता बढ्नेछ । अरुको काम गरेर अपयश मात्रै मिल्ला ।
साहास,धैर्यता र पराक्रम बढ्नेछ । उद्योग,धन्दा बन्द व्यापारमा प्रगति हुनेछ । काम गरेर दाम राम्रै कमाईनेछ । पढाईमा भने कमै ध्यान जाने छ । अरुको भर नपर्नु होला । सहयोग गर्ने भन्दा माग्ने बढि हुनेछन् ।
आफन्त बनेर धोेका दिन सक्छन् सके सम्म आर्थिक कारोवार नगर्नु होला । घर परिवारको चिन्ताले छोड्ने छैन । काम गर्न सके दाम आउनेछ । प्रतिष्ठाको ख्याल राख्नु होला । पढाई लेखाईमा भने प्रगति हुनेछ ।
काम गर्ने वातावरण बन्नेछ । गरेका अधिकाँश काम सफल हुनेछन् । धार्मिक काममा धन लगानी हुनसक्छ । आत्म विश्वास बढ्नेछ । आफुमा भएको उर्जाको सदुपयोग गर्नु होला । कारोवारमा ध्यान दिनु होला ।
आफन्तका लागि धन खर्च गर्नु पर्ला । अनावस्यक घुमाई फिराई बढि हुनेछ । स्वास्थ्यमा लगानी गर्नु पर्ने अवस्था आउन सक्छ । लेनदेन कारोवारमा विवाद पर्न सक्ने कुरालाई नकार्न सकिन्न । विश्वास गरेकाले धोका दिन सक्छन् ।
नसोचेका ठाँउबाट धन आउनेछ । व्यापार व्यवसायबाट सोचे भन्दा राम्रो आम्दानी हुनेछ । आर्थिक कारोवारमा भने चनाखो रहनु होला । आफन्तबाट सहयोग साहानुभूति मिल्नेछ । व्यक्तित्व प्रभाव पर्नेछ ।
अधुरा रहेका काम धेरै सम्पन्न हुनेछन् । शत्रु माथि विजय प्राप्त हुनेछ । काम देखेर अरु पनिप्रभावित हुनेछन् । एउटा कामको टुङ्गो लागे पछि आर्को काममा हात हाल्नु होला । इज्जत प्रतिष्ठ बढ्नेछ ।
समय सुधारोन्मुख छ तर कामले पूर्ण गति भने लिने छैन । बाहिरी काममा समय बढि दिदा आफ्ना धेरै काम अधुरा रहने छन् । व्यापार व्यवसायमा पनि खासै प्रगति हुने देखिन्न । धार्मिक यात्राको योग देखिन्छ ।
प्रकाशित मिति: शुक्रबार, भाद्र २९, २०७५ समय: २२:५८:२७